Kooxda Ugu Dhow Ee Sergio Ramos Uu Heshiiska U Saxeexi Doono
Kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa la sheegayaa inuu kusii jeedo horyaalka waddanka Ingiriiska oo uu u saxeexi doono mid ka mid ah kooxaha waaweyn, balse aanay ku jirin Tottenham oo uu hormood u yahay tababare Jose Mourinho.
Sida ay Dareemayaan Xiddigaha Man United
Weeraryahankii hore ee Tottenham ee Diimitar Berbatov ayaa hoos u dhigay fursadda uu Jose Mourinho mar kale kula midoobi karayo Ramos, balse ay isku noqon karaan kuwo xafiiltan ku dhex maro garoomada.
Sida ay warbaahinta Ingiriisku kusoo warramayaan, Tottenham oo Axadda kulan aad loo sugayo ugu tegaysa Chelsea oo ay garoonka Stamford Bridge foodda isku dari doonaan, ayaa waxay diiraddeedu saaran tahay inay gacanta ku dhigto, kana shaqayso sidii ay bisha January ee foodda inagu soo haysa heshiis hordhac ah ula sii gaadhi lahayd Sergio Ramos oo qandaraaskiisa Real Madrid uu ku egyahay dhamaadka xili ciyaareedkan.
Jose Mourinho oo waqtigii uu Real Madrid tababaraha ka ahaa aanu fiicnayn xidhiidhka uu Sergio Ramos la lahaa, saddexdoodii sannadoodna ay qaybtii dambe ahaayeen kuwo adag ayaa waxa la rumaysan yahay inuu haddana doonayo inuu keensato Tottenham, isla markaana ku qanacsan yahay awoodda 34 jirkan oo ka caawin kara inuu koobab kula guuleysto Spurs.
Laakiin Berbatov oo laba sannadood u ciyaaray Spurs ayaa rumaysan in kooxdiisa hore aanay heli doonin Sergio Ramos oo uu sii joogi doono Santiago Bernabeu amaba uu tegi doono Manchester United, waxaanu yidhi: “Kutidhi-kuteen badan ayaa ka jirta mustaqbalka Sergio Ramos, sida ay sheegayaan wararkuna wali ciyaartoyga iyo kooxda ayaan iskugu imanin heshiis cusub.
“Ramos waa 34 jir, waxaana la filayaa inuu u dagaallami doono heshiis sannad ama laba sannadood ah.
“Anigu waxaan hubaa in Ramos uu tegi doono koox sida Manchester United oo kale ah, taas oo si fiican ugu shaqayn doonta. Wuxuu leeyahay qaab wanaagsan, waa difaac heer caalami ah, waxaanan fiikir ahaan rumaysanahay inay kubbad badani ku hadhay wali.
“Waxa ii muuqata inuu sii ahaanayo ciyaartoy Real Madrid ah, kooxduna ay xal u heli doonto sidii uu kusii joogi lahaa. Layaab ayay noqon doontaa haddii uu tago, laakiin haddii aanay waxba si hagaagsan u shaqayn, waxa hubaal ah in kooxo badan ay xiisayn doonaan.”
Juve Oo Doonaysa Van De Beek, Man United Oo Aan Ka Quusanin